Hetsika Rohy : “governemanta teknisianina no vahaolana” | NewsMada
Hetsika Rohy : “governemanta teknisianina no vahaolana”
“Anisan’ny dingana lehibe hamahana ny krizy ny fametrahana governemanta teknisianina. Mendrika izany, tsy mitanila, manana fahaiza-manao hitantana ny firenena ao anatin’ny fotoana voafaritra, ary manomana sy miara-miisalahy amin’ny Ceni, hanatanteraka ny fifidianana.“
Fanambaran’ny hetsika Rohy, afakomaly, io, momba ny fananganana governemanta Ntsay Christian. Governemantan’ny fanavotam-pirenena ahitana teknisianina no vahaolana hivoahana amin’izao krizy izao. Tsy mpikambana ary tsy miandany amin’ny antoko politika izany, afa-kitantana amin’ny fomba tsy mitanila sy eken’ny rehetra ny fifidianana. Eo koa ny fiandraiketana ny fampandehanana ny raharaham-pirenena.
Mila miomana amin’ny fifidianana ny antoko
Na tsy tena demokratika sy tsy nandraisan’ny rehetra anjara aza ny fanendrena ny Praiminisitra Ntsay Christian, azo heverina fa teknisianina izy: tsy manana loko politika, afa-mametraka governemanta sy fomba fiasa tsy mitanila. Mila tohizana izay fomba fiasa izay amin’ny fanendrena minisitra: teknisianina, mendrika, tsy miandany. Mba tsy ady sy fizaran-tseza fotsiny izany.
Mila samy miomana amin’ny fifidianana ny antoko sy ny mpitarika politika, miatrika sy miandry ny vokatr’izany, hahazoany mitondra sy manatanteraka ny programa fampandrosoana. Tsy mety raha sady mpitsara no mpilalao amin’ny fifidianana ny antoko. Izay no mahatsara ny tsy hitsabahany amin’ny governemanta hiara-miisalahy amin’ny Ceni amin’ny fikarakarana fifidianana, ary ny fitantanana ny firenena amin’ny fotoana voafetra.
Tokony ho amin’ny volana oktobra ny fifidianana
Tokony ho amin’ny volana oktobra ny fihodinana voalohany, hahazoana mamarana sy manapariaka ny lalàna. Mba hananan’ny Ceni sy ny governemanta ary ny mpiantsehatra hafa fotoana hiomanana amin’ny fanatanterahana ny fifidianana izany.
Tsara hatomboka ho fomba fiasa hametrahana ny rafitra sy ny olona amin’ny governemanta tsy mitanila ny fanaovana mangarahara. Eo koa ny fandavana ny kolikoly, indrindra amin’ny fitantanam-bolam-panjakana. Toy izany koa amin’ny fanendrena sy ny famindran-toerana amin’ny asam-panjakana amin’ny minisitera.
Kajikajy politika… mamery vahoaka 25/11/2020
Vaomieran’ny HCJ – Kolikoly sy fanodinkodinam-bola: nahemotra indray ny raharaha momba ireo minisitra efatra teo aloha 25/11/2020